Se7en kwiSevenhill- "ukutshona kwelanga"
Indawo egqibeleleyo yokuphumla, ukuphumla kunye nokusetha kwakhona! Ukuhanjiswa kokutya okufumaneka kwiinkonzo zasekuhlaleni.
Indawo yethu yeVineyard Retreat iseSevenhill, eMzantsi Ostreliya. I-Se7en kwi-Sevenhill ibonelela ngeekhabhinethi ezimbini zelog ecaleni kodwa zombini zibucala kwaye zibekwe kwindawo yethu yediliya epholileyo ebekwe phezulu endulini, ebonisa iimbono ezintle nezingaphazamisekiyo zasentla.
Iikhabhathi ziziqulethwe ngabo bonke ubutofotofo isibini esinokufuna ukonwabela uxolo, imfihlo kunye nothando lwemeko entle.
I-Se7en kwi-Sevenhill yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla, ukuphumla kwaye ukonwabele isidiliya esimangalisayo kunye neembono zentlambo. Ekuseni uya kuvuka ubone iimbono ezigqwesileyo kwaye izandi kuphela zezo zeentaka ezihlala kunye nezilwanyana zasendle. Izipho zethu kuwe ziitshokholethi ezimnandi kunye nebhotile yewayini yaseClare Valley yengingqi eveliswe kwidiliya yesidiliya. Ngorhatya unokungcamla iglasi yewayini yaseClare Valley kwiveranda kwaye ubukele ukutshona kwelanga. Indawo yothando egqibeleleyo!
Yiba nomfanekiso wakho phambi komlilo weenkuni ebusika kwaye ujabulele induduzo yomoya womoya ehlotyeni, kunye neTV, iDVD, iCD kunye ne-IPOD Dock.
Kukho amakhitshi axhotyiswe ngokupheleleyo kunye nezibonelelo zebarbeque.
Se7en eSevenhill- "Lunjani uxolo!"
I-Sevenhill 'ikwintliziyo' ye-Clare Valley, kwaye iliziko labantu basekhaya kunye nabakhenkethi abandwendwela lo Mmandla.
Imalunga ne-140km emantla eAdelaide. Yidolophu encinci enomtsalane etyebileyo kwaye inembali eninzi kwaye malunga nemizuzu emihlanu ukusuka eClare.
UPeter noJulie bayafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo okanye izicelo ukuba ziyafuneka.